Paris Saint-Germain Oo Barcelona U Soo Bandhigtay Fursad Ay Dib Ula Soo Saxiixan Karto Neymar.
HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo Barcelona u soo bandhigtay fursad ay dib ula soo saxiixan karto Neymar.
November 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Paris Saint-Germain Madaxweyne Nasser Al-Khelaifi ayaa lagu soo waramayaa inay siiyeen Barcelona fursad ay dib ula soo saxiixdaan Neymar inta lagu jiro xagaaga soo aadan marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
29-sano jirkaan ayaa kaliya u saxiixay PSG heshiis waqti dheer ah bishii May, iyadoo xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil uu qandaraaskiisu ku eg yahay xagaaga 2025.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay El Nacional , Al-Khelaifi ayaa u soo bandhigay Barcelona weeraryahanka Barcelona dhex dhexaadiye, halka kooxaha Premier League sidoo kale la ogeysiiyay.
Warbixinta ayaa sheegeysa in dalab ku kacaya €80m (£68.3m) ay u badan tahay inay aqbalaan kooxda Mauricio Pochettino , iyadoo kooxda Ligue 1 ka dhisan ay dooneyso inay dib u habeyn ku sameyso kooxdeeda xagaaga soo aadan.
Barcelona, ​​si kastaba ha ahaatee, ayaa la rumeysan yahay inay mudnaanta siineyso u dhaqaaqista xidiga Liverpool ee Mohamed Salah , waxaana lagu xamanayaan inaysan ka fikirin inay Neymar ku soo celiyaan Camp Nou xilligan.
Xiddiga reer South America ayaa horay u matalay kooxda Catalan intii u dhaxeysay 2013 iyo 2017, isagoo dhaliyay 105 gool 186 kulan oo uu saftay, ka hor inta uusan si la yaab leh ugu dhaqaaqin Paris.
Neymar ayaa ku dhibtooday inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa ugu fiican heerka kooxeed xilli ciyaareedkan, isagoo kaliya seddex gool dhaliyay seddexna caawiye ka ahaa 11 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.